DataNumen Outlook Express Repair - Ku soo dhoofso Fariimaha la soo helay Galka Faylka Outlook Express
Bogga ugu weyn Products DataNumen Outlook Express Repair Ku soo deji fariimaha la soo helay galka Boostada gudaha Outlook Express
Ku soo deji fariimaha la soo helay galka Boostada gudaha Outlook Express
Xusuusin: Kahor hawlgalka soo dejinta, fadlan hubi in Outlook Express galka boostada ee fariimaha la keenayo ay si sax ah u shaqeeyaan. Haddii kale, fadlan kaydso ka dibna tirtir faylka dbx ee u dhigma galka boostada.
Start Outlook Express oo sii fur.
Xulo dhammaan farriimaha la soo dhoofinayo ee galka wax soo saarka:
Talo: Si aad u xulato koox feylal fariin ah, hoos u dhig fure SHIFT, dhagsii feylka fariinta ee kooxda dusheeda, ka dibna riix feylka farriinta ee gunta kooxda. Si aad ugu darto faylasha farriinta koox aad horey u dooratay, hoos u dhig fure CTRL, ka dibna dooro feylasha farriinta aad rabto inaad ku darto. Si looga reebo feylasha la xushay, hoos u dhig fure CTRL, ka dibna dhagsii faylasha farriinta la xulay.
Ka dhaji fariimaha la xushay galka.
Ku rid farriimaha tarka hel galka boostada meesha furan Outlook Express.
Intaas kadib, waxaad ku shaqeyn kartaa fariimaha la soo dhoofsaday sida kuwa caadiga ah Outlook Express.
Tallaabada 1, 2, 3 ee nidaamka soo dejinta waxaa lagu muujiyey animation-ka soo socda: